Baadh shabakad SMB / CIFS la'aan ah Samba | Laga soo bilaabo Linux
Saaxiibbo waad salaaman tihiin !. Sida aan ku talinayno in our maqaal hore, waa inaan ka gudubnaa kuwa fudud fudud. Sidaa darteed, waxaan sii wadeynaa taxanaha barashada Navigation iyo Isticmaalka ilaha aan ka helno shabakada SMB / CIFS.
Sawirada la muujiyay waxay u dhigantaa xarun-shaqo Debian Wheezy oo leh GNOME-Shell. Waxaan u maleynayaa in wax kasta oo aan sharaxaad ka bixin doono xiga ay sidoo kale ansax u yihiin Ubuntu.
Debian waxay ku rakibtaa maktabadda si caadi ah libsmblient, xirmo u oggolaanaya codsiyada kooxdeena inay kula sheekaystaan ​​samba iyo Microsoft Windows server.
Taas oo tilmaamaysa taas MAYA Samba waa in lagu rakibaa si loo helo shabakadaha SMB / CIFS. Taageeradaani waxay ku jirtaa xudunta nidaamkayaga hawlgalka. Dabcan shaqooyinkeeda waa kuwo aasaasi ah laakiin ku filan in la maro.
Haddii aan furno Nautilus oo aan dhagsano badhanka «Baadh shabakadda», waanan karnay doorbidyada in "Meel:", waan arki doonaa sida ay isu bedesho / guriga / isticmaalaha meesha shabakad: ///. Haddii aan sii wadno daalacashada, waxaan arki doonnaa waxyaabaha soo socda:
Markaad laba jeer gujineyso calaamadda «Windows Network», dhammaan Kooxaha Shaqada ama "Kooxda Shaqada" laga bilaabo LAN-keena. Xaaladaheena, kaliya kooxda "DCH" ayaa la muujiyay. Haddaba, daawo sida ay "Meel:" de shabakad: /// a smb: ///:
U fiirso isbedelka smb: // dch / adigoo laba jeer gujinaya Kooxda Shaqada:
Ugu dambeyntiina, waxaan helnaa liiska kumbuyuutarrada laga yaabo ama laga yaabo inay wadaagaan kheyraadka, laakiin taageeraya borotokoolka SMB / CIFS. Markaad xulaneyso qalabka aan daneyneyno, Liistada Kheyraadkeeda Wadaagga waa in la muujiyaa, kaliya haddii adeegaha ama mashiinka su'aashu ka taagan tahay uu u oggolaanayo isticmaale kasta inuu helo liiskaas, oo ka dhigan dabeecadda caadiga ah. Markaad gudubto u fiirso isbeddelka Goobta: a smb: // alfa:
Haddii kheyraadka la wadaago ee aan dooneyno inaan furno ay ilaalinayaan magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah, taas oo caadi ka ah shabakadaha ganacsiga, waana ognahay inaan fasax u haysanno helitaankeeda, ka dib markaan si sax ah iskula saxno waxaan heli karnaa waxa ku jira.
Ogsoonow in magaca DOMAIN taas oo kiiskan uu yahay magaca Kooxda Shaqada oo ku jira xaraf waaweyn.
Ka dib markii aan si guul leh u xaqiijinno, Goobta: u beddel smb: // alpha / des /, iyo sidoo kale astaan ​​ayaa ka soo muuqan doonta desktop -ka haddii aan hawlgalino desktop-ka oo wata magaca «des alfa«, Kaas oo u shaqeeya sidii« Xiriir »ilahayaga fog.
Sidoo kale Nautilus kheyraadka wuxuu ka muuqan doonaa Dhinaceeda Goobaha «Des ee alfa»Aagga« Shabakadda ».
Haddii aan u baahanahay inaan furno fayl gaar ah -via network - oo leh codsi maxalli ah-oo lagu rakibay kombuyuutarkeena- oo la xiriira nooca faylka ah, waxaan arki doonaa sida qaar si guul leh ugu furmaan, halka kuwa kalena MA FURO. Waxay ku xirnaan doontaa, arrimaha kale, ee ku saabsan taageerada codsigeennu u leeyahay hab maamuuska SMB / CIFS.
Haddii aynaan furi karin fogaan fog oo aynaan rabin inaan ku rakibno xirmooyin dheeri ah fuul kheyraadka la wadaago ee maxalliga ah, waxaanan u baahanahay inaan u furno sida loo akhrin karo oo keliya ama wax looga beddelo - sida ku cad rukhsadaha aan haysanno -, waxa aan sameyn karno waa inaan ku koobiyeyno kumbuyuutarkeenna oo aan ku shaqeyno faylka maxalliga ah.
Haddii aan dooneyno inaan xirno isku xirnaanta lagu aasaasay Kheyraadka fog, waxaan ku sameyn karnaa Nautilus lafteeda adoo midig u riixaya astaanta u dhiganta xulashada ikhtiyaarka "Kala-bax".
Habka ugu dhakhsaha badan ee lagu heli karo ilaha aan horay u ogaanay goobtooda waxay noqon doontaa in lagu fuliyo -tanka Alt + F2 ama lagu qanciyo- amarka soo socda:
nautilus smb: // server / ilo
Iskuday waadna arki doontaa taas, haddii loo baahdo xaqiijin si loo helo kheyraadka, marka adeegsadaha la muujiyo, wadahadalka xaqiijinta ayaa xoogaa kala duwan.
Haddii ay dhacdo waa Server Madaxbanaan (standalone) uusan ka diiwaan gashanayn Domain, isticmaaluhu waa inuu ka jiraa Server-ka waana inuu haystaa ogolaansho uu ku aqrin karo ama ku badali karo ilaha. Magaca DOMAIN wuxuu noqonayaa midka Server-ka laftiisa standalone.
GNOME iyo KDE uguyaraan, sidoo kale waxaa jira qaab kale "Ku xirnaanta Server" Raadiyaha faylka ee loo yaqaan 'Dolphin file' ee KDE ayaa noo fududeynaya astaamihiisa "Shabakad", sida Nautilus oo kale.
Dhanka kale, haddii aan u baahanahay helitaan xirfad leh oo ku saabsan LAN ganacsi oo aanan dooneynin inaan ku biirno domainka goobteenna shaqada, si aanan ugu baahnayn inaan xaqiijino mar kasta oo aan dooneyno inaan helno ilo gaar ah, waan rakibi karnaa smb4k deegaan kasta oo desktop ah xitaa haddii uu ka soo jeedo KDE.
Xirmooyinkaani waxay ku rakiban yihiin kuwa kale oo ku tiirsan: samba-caadi-bin, smbclient y smbfs, ugu yaraan ku cadaadi. Waxay leedahay interface aad u dareen leh xukunkeyguna waa xirfadle.
Waxa ilaa hadda la sharaxay waxay umuuqdaan kuwo aasaasi ah. Xaqiiqdii, inta badan howlaha ka dhaca server-yada oo noo oggolaanaya inaan dhex marno shabakadda SMB / CIFS, ayaa gabi ahaanba u ah mid hufan isticmaalaha. In kasta oo wax walba jiraan, waxaan rabnaa inaan tilmaanno dhinacyada soo socda:
Si loo helo ilaha shabakad leh Domain, ama Windows ama Samba, MAYA Waa qasab in kumbuyuutarkeena macmiilku ka diiwaangashan yahay Domain-ka, in kasta oo haddaan sidaa yeelno waxay noqoneysaa mid aad ugu raaxeysaneysa inaan dhex marno LAN-da maadaama aan mar qudha is-caddeynayno.
Kumbuyuutar kasta oo ku xiran LAN waa inuu wadaagaa isla shabakad ama «network»Iyo maaskaro isku mid ah. Haddii shabakaddu tahay 192.168.10.0 oo maaskaro uu yahay 255.255.255.0 (192.168.10.0/24), waxay muujineysaa shabakad "C" ah oo aan ku haysan karno illaa 254 kombiyuutar. Shabakad ka mid ah fasalkan ayaa daboolaya baahiyaha ugu badan ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Sidaa darteed, kumbuyuutar kasta oo ku xiran shabakadda waa inuu lahaadaa cinwaan IP ah 192.168.10.xxx/255.255.255.0, si loo caddeeyo inay ka wada qaybgalaan isla shabakadda.
Haddii adeeggu uusan ku shaqeyneynin shabakadda DNS, ma jiri karo xal magac sax ah cinwaanada IP ee kombiyuutarada, ilaa aan u qeybinno feyl mid walboo iyaga ka mid ah martigeliyeyaasha kaas oo ka koobnaan doona dhamaan magacyada kooxaha iyo cinwaankooda IP-ga. Eeg / iwm o nin martigaliya. Faylka martigeliyeyaasha waa wax aan ka badnayn Jadwalka Rasmiga ah ee Raadinta Magacyada martida ee cinwaankooda IP-ga.
In kasta oo la xirayo xiriir waxaan doorannay ikhtiyaarka «Dismount» Nautilus ama Link-ka laga sameeyay Desktop-ka, "Kheyraadka dhab ahaan kuma xirna nidaamkayaga faylka ee maxalliga ah". Xiriiriyaha wuxuu u weeciyaa codsigeena a Meel gaar ah (eeg GNOME 2.xxxx caawimaad) oo ah URL nooca ah smb: // kombiyuutar fog / wadaag-wadaag.
Taageerada shabakadaha SMB / CIFS oo noo ogolaanaya inaan la hadalno Windows iyo Samba server, waa qeyb ka mid ah Linux Core, MAYA ee barnaamijka Samba. Midkoodna baakado smbfs, smbnetfs, iyo cifs-maacuunta. Wixii macluumaad dheeraad ah, eegSamba3-ByTusaale. Cutubka 13 Waxqabadka, Kalsoonida, iyo Helitaanka«.
Sida ay ku talisay Samba, iyo markasta oo ay suurta gasho, WINS server waa in lagu rakibaa subnet kasta. Adeeggan, oo ay sidoo kale bixiso shirkadda Samba lafteeda, wuxuu si weyn u fududeeyaa xallinta magaca NetBIOS. Adeegga WINS wuxuu u yahay shabakadda SMB / CIFS waxa DNS u yahay internetka. MAYA waa inaad haysataa wax kabadan hal server WINS isla subnetka.
Maaddaama qoraalkan aan loogu talagalin inuu beddelo dukumiintiyada tirada badan iyo kuwa xiisaha leh :-), fadlan caddee shakigaaga adoo akhrinaya. Samba ma cafiyo bukaanka wuxuuna saaxiib la yahay kuwa wax ka barta xitaa haddii asal ahaan ay tahay.
Oo waxay ila tahay inay maanta igu filan tahay. Sidaa darteed, Waxqabadkii waa dhammaaday, sxb!
Illaa xiisaha soo socda !!!.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Raadi shabakad SMB / CIFS la'aanteed Samba
Cajiib! Tani waa habka ugufiican ee aan raadinayay inaan ku xirnaado Windows faylasha la wadaago iyadoon dhib laga helin SAMBA ama nooc kale.
Mahadsanid sxb Tan waxaa loo isticmaali karaa xitaa tan ugu cusub.
farshaxan aad u wanaagsan. laakiin ... Kuma qanacsani in samba ay kujirto xarkaha, waa inbadan oo hubaal ah inaad haysato macmiil smbclient ah waana taas sababta aad u gali karto samba ama aad ku guuleysan karto shabakad.
Wax kale oo runta ka fog Sidaan ku sheegay maqaalka, Samberos laftoodu waxay sheeganayaan inaysan shaqo ku lahayn taageerada kernel ee daalacashada shabakadaha SMB / CIFS. Xitaa smblilient-ka ka socda Samba, waa la rakibi karaa intaas ka dib.
haddii aad leedahay nautilus, waxaa hubaal ah inuu xiriir la leeyahay gvfs sidaas darteedna uu rakibo
karti muujisid libsmbclient
Gobol: lama rakibin
Multi-Arch: isku mid
Nooca: 2: 3.6.16-1
Mudnaanta: ikhtiyaari ah
Dayactirka: Debian Samba Maintainers
Cabbirka aan la daboolin: 6164 k
waad tuuri kartaa apt-cache rdepends libsmbclient oo arag waxa socda
Si otomaatig ah ayaa loo rakibey: haa
Nooca: 2: 3.5.6 ~ dfsg-3
Soo-saare: Debian Samba Maintainers
Cabbirka aan la daboolin: 6242k
Waxay kuxirantahay: libc6 (> = 2.5), libcap2 (> = 2.10), libcomerr2 (> = 1.01),
Sharaxaad: maktabad wadaag ah oo lagula wadaago aaladaha SMB / CIFS
Xirmooyinkaani waxay bixiyaan maktabad wadaag ah oo u oggolaanaysa codsiyada macmiilka inay la hadlaan
ilaa Microsoft Windows iyo Samba server adoo adeegsanaya hab maamuuska SMB / CIFS.
Bogga hore: http://www.samba.org
Kaydinta nooca, waa isku mid, sheygu waa dhinaca kale, waa sababta aan u dhigay sheyga rdepends
Gadaal ayaan u dhigay
apt-cache waxay kuxirantahay nautilus
apt-cache waxay kuxirantahay gvfs
apt-cache waxay kuxirantahay gvfs-gadaal
apt-cache waxay kuxirantahay libsmbclient
oo waxaan tagnay bandhigga kartida
waa ansax in aysan rakibin smbclient ama samba. hadaad u isticmaasho gvfs gadaal ahaan
ama laga yaabee waxaad gelisay Sharaxaad leh (apt-cache ama aptitude) show smbclient ama samba
ku saabsan cifs-utils
apt-cache wuxuu ku faanaa libsmbclient
Tuujinta, haddii aad ordo "apt-cache waxay kuxirantahay nautilus | grep libsmbclient ', waxba soo celin maayo.
Hagaag, sifiican u aqri in maqaal aan qoro:
"Debian waxay ku rakibtaa maktabada libsmbclient asal ahaan, xirmo u ogolaanaya codsiyada kooxdeena inay kula sheekaystaan ​​serverka Samba iyo Microsoft Windows."
U fiirso inaan idhaahdo "Codsiyada." Qalab nadiif ah oo leh GNOME ama KDE ayaa ku dhejiya
Xiiso leh, waan fahmay in tan ay sameeyeen samba-client 😀
Waxaan hadda rakibay cibil cibil-debian wheezy cd1 iyo samba macmiilku wuxuu muujiyaa inuu yahay mid la rakibay
Waxaan arkaa in xirmada libsmbclient-ka lagu shubay asal ahaan markaa cinwaanka waa khalad
fiiri nuxurka cd 1
Cinwaanka waa sax, @rolo, maadaama Samba Suite aan lagu rakibin. Xirmada samba MA LAGU rakibay. Dhinaca kale, waa inaad dib u eegto fikradda ah waxa Xidhmada Virtual-ka ay tahay. Waad ku mahadsantahay faallooyinka !!!.
Julius Cesar Dominguez dijo
!!! Maxaa aqoon fiican u leh samba ..?; Waxba ma fahmin; Waqtiyada qaarkood si fiican ayey aniga ila shaqeysaa aniga iyo 40% isku-xirku hoos ayuu u dhacayaa, anigu waxba igama gelin; Sikastaba waan ku faraxsanahay inaan ogaado inay jiraan dad waxbadan ka og arinta.
Jawaab Julio Cesar Dominguez
Si fudud oo la yaab leh, taxane kaamil ah oo maqaallo ah oo lagu bilaabayo SAMBA, aad u fiican !!!
U aqriso samir iyo raaxo!
Waad ku mahadsantahay faallooyinka !!!. Ujeeddada ayaa ah: in la siiyo barta laga soo galo mawduuca Samba
Wanaagsan tan iyo inta ka hartay qodobbada ku saabsan Samba! Runtu waxay tahay, waan necbahay isticmaalka SMB / CIFS, laakiin markii laygu qasbo, maqaallada sidan oo kale ah waxay yareeyaan madax-xanuun badan. Mahadsanid!
Waad ku mahadsantahay faalladaada waana ku faraxsanahay inaan ku caawiyey.
Haye, shaki ayaan qabaa. Suurtagal ma tahay in loo diido marinka ka baaraandegidda shabakadda Nautilus isticmaale la siiyay debian 8? Hadday saas tahay sidee noqon kartaa?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay oo waan kuugu hambalyeynayaa maqaalkaaga.